Warmly Welcome: 2008
မင်းလေး .. ..
Posted by Welcome at 9:30 AM
ပိုက်ဆံမပေးရဘဲ အာကာသထဲ က သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆီကို အလည်သွားရင် ကောင်းမလား။ ဗမာငွေသိန်း ၅-၆ ဆယ် မကုန်ဘဲ စင်္ကာပူမှာ ဘွဲ့လွန်အတွက် ကျောင်းသွားတက်ရင် ကောင်းမလား။ စိတ္တဇလိုအတွေးနဲ့ ပိန်တာရိုးဖြစ်နေတဲ့ တစ်ဖက်သတ် ချစ်ချစ်ကို တွေ့ရဖို့ ဂျပန်သွားပြီး ပဂေးဆန် သွားလုပ်ရင် ကောင်းမလား။ မနက်က MRTV-4 မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ 08 model ပြိုင်ကားနီနီကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး မြို့ထဲလျှောက်ပတ် နေရရင်ကောင်းမလား။ ဒီမနက်မှာ ရှစ်မိုင်ရွှေဘဲက ဘရိတ်ဖတ်ကို အိမ်ကနေမှာစားရရင် ကောင်းမလား ဆိုပြီး ဆောင်းအေးအေး မနက်ခင်းမှာ အပျင်းအထူကြီးကို ဖက်ပြီး အိပ်ရာကမထနိုင် သေးပါဘဲ အတွေး ရေယာဉ်ကြောမှာ အလိုက်သင့်မျှောရင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်တည်း စိတ်ကူးယဉ် နေမိပါတယ်။ အခမဲ့ရတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေက တော်တော်ကြီးကို ဖီလင်ရှိပေမယ့် ဘေးကနေကြည့်နေတဲ့ သူများရှိရင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် အပြောခံရပါလိမ့်မယ် ငပျင်း၊ ဟဲ့ ...... ငပျင်းကြီး ရယ်လို့ပါ။
ငယ်ဘ၀တုန်းကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိမ်မက်တွေကတော့ ရိုးလွန်းပါတယ်။ ဘောလုံး သွားကစားရင် နာမည်ကျော် ဘောလုံးကစားသမား တွေဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်သလို၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ညဘက် တီဗွီကြည့်ရင် ဇာတ်လမ်းထဲပါတဲ့ မင်းသားက ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်လှတဲ့ မင်းသမီးနဲ့ တွဲကခဲ့ရတာကလည်း မမောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်ပန်းလူပန်းနဲ့ အိပ်မပျော်ပေမယ့် တစ်ရေးနိုးရင် မိုးအလင်းပါပဲ။
အလုပ်တစ်ခုကို တာဝန်ခံပြီး လုပ်လာရတဲ့ အခါမှာ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ၊ အိပ်မက်ဆန် တာတွေ နည်းနည်းတော့ လျော့လာတယ်။ ကားမောင်းရင်းနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်နေရင်လည်း ကိုယ်မောင်းတဲ့ ကားက ချောက်ထဲ ရေဆင်းသောက်ဖို့ပဲ ရှိတော့မှာလေ။ ဒါကြောင့် လျော့သွားတာကို ပြောတာပါ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပျက်ကပ်က ဒီအထိ ရောက်လာမယ် မထင်ခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ အဲဒီကယက်က ကားပေါ် ပြန်မတက်နိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ လုပ်နေမှ လူပီသပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘလောဂ့်ဂင်းတယ်။ လည်တယ်။ ဖတ်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ စိတ်ကူးယဉ်တာ နည်းနည်း ပိုစိပ်လာတယ်။ တွေးမိသမျှ ဘလောဂ့် ရေးဖြစ်တယ်။ ရေးသမျှတွေလည်း တန်ဖိုးကြီးတဲ့စာတွေ မဟုတ်လောက် သေးတာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချင့်ချိန်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ ပျော်ပါတယ်။ အဲဒီ အပျော် သေးသေးလေးကပဲ ဆက်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေစေဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
Tag ရေးဖို့ ပြောလာတဲ့ ညီငယ် ဖိုးဂျယ် ရေ အစ်ကို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ နေရာကတော့ ခုတင်ပေါ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အချိန်ကတော့ အိမ်ယာဝင်ချိန်နဲ့ မနက်အိပ်ယာထချိန် ဖြစ်တယ်။ မရှိတဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက် အကြောင်းကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး စာတွေရေးဖြစ်တာ၊ ကဗျာတွေ ဖွဲ့ဖြစ်တာတွေကို ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရစေဖို့ Tag ထားတာကို ကျေးဇူးပါ။ အိုကေပါစေ ညီငယ် ဖိုးဂျယ်။
ကိုယ်ကသာ အတက်ခံနေရတာ (ဆောရီး) Tag ခံနေတာ၊ ဒီတစ်ခါတော့ ဘော်ဒါသယ်ချင်း ကိုကို၊ မမ၊ ညီမငယ်တွေကို ပြန် Tag လိုက်ပါအုန်းမယ်။ အေးအေးကြီးတွေ နေတတ်တဲ့ ဘော်ဒါသယ်ချင်းကိုကို၊ မမ တွေကတော့
ညီမငယ် ကြယ်ပြာ နဲ့
ညီမငယ် ဝါဝါ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ရရင်၊ အပန်းလည်း မကြီးရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်လေး တွေကို ရေးသားပေးပါအုန်းလို့ .. ..
Posted by Welcome at 3:55 PM
"ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး၊ ဝဝကစ်ကစ်လေး ဘာတွေများ ကျွေးလည်းမသိဘူးနော်" လို့ အမေးခံရတဲ့ အမေတိုင်း ၀မ်းပမ်းတသာနဲ့ အားပါးတရ ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကလေးကို ဘယ်လိုကျွေးပြီး ဘယ်လို ပြုစုနေတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ ငယ်တုန်းကလေးဘဝမှာ ဝ ချင်သလောက် ဝ နိုင်ပါတယ်။ ဝ ပါမှ ကျန်းမာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဘဝ ကျော်လွန်ပြီး ဆယ်ကျော်သက် ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ခေတ်မီတဲ့ အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ စတိုင်လ်ကျကျ ၀တ်ချင်လာတဲ့ စိတ်ကလေးကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျပြီး အချိုးကျနဖို့ အာရုံစိုက်လာကြတယ်။ များသောအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုလေး လုပ်တာထက် နည်းလမ်းမမှန်ကန်တဲ့ အစားအစာ အငတ်ခံတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များတဲ့ ဆေးတွေ သောက်သုံး တာတွေကြောင့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အသားအရေ၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားမျိုး မရှိတော့ဘဲ ပုံပန်းမကျ ပိန်လှီသွားတာကို မြင်တွေ့ဖူးမှာပါ။ လှချင် ပချင်တဲ့ စိတ်လေးတစ်ခုထဲနဲ့ စနစ်တကျ မဟုတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချနည်းတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင် စရာရှိပါတယ်။ ပညာသင်တဲ့ အရွယ်ဖြစ်လို့ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ပြီး ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မျိုးတော့ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး လှပစိုပြေမှု ရှိမှာပါ။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကတော့ ပိန်တာ၊ ၀တာတွေဟာ အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ဖို့ မသင့်တော်သေးပါဘူး လို့မြင်မိပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လွန်လို့ အပျိုဖော်ဝင်တဲ့ ၂၀ ကျော် ၃၀ ၀န်းကျင်အရွယ် ရောက်လာရင် အမြင်တစ်မျိုး ဖြစ်လာပါမယ်။
" မတွေ့တာကြာလို့လားမသိဘူး၊ ပိန်သွားတယ်နော်"
လို့များ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ဆက်စကား ကြားမိရင် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်ပြီး
" အို . . . အခုက ၀လာတာ၊ အရင်ကဆို ဒီထက်တောင် ပိန်သေး"
ဆိုပြီး ချက်ချင်းကြီး တုန့်ပြန်ပြောဆိုမိကြမှာပါ။
"ဟယ် .. .. ဝလာလိုက်တာကြည့်စမ်း၊ ပုံပျက်နေပြီ၊ ဝိတ်လျော့အုန်း" လို့
ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်စကား ကြားလိုက်ရင်တော့ဖြင့် အပြောခံရသူခဗျာ စိတ်ဓာတ် အကြီးအကျယ် ကျဆင်း သွားနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ထဲနေလည်း တိုးတိုးလေး ရေရွတ်မိတာက
" အင်း .. ဘာမှလည်း သိပ်မစားပဲနဲ့များ၊ ဒီကြားထဲ ဝ, ဝ လာနေတာ စိတ်ကိုညစ်တယ်"
ဆိုပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ပြန်ပြောမိမှာပါ။ ဒီလို အပြောခံရပြီ ဆိုတာနဲ့ အစားအသောက်တွေ တစ်အားကြီးလျော့ပစ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရမရတော့ အားလျော့လာ၊ ဒီလိုနဲ့ အချိန်တိုင်း ဗိုက်ဆာသလို ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါတလေ အငမ်းမရစားပစ်လိုက်နဲ့ နဂိုကထက် ပိုပြီး အလေးချိန် တိုးလာမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။
ကိုယ်အလေးချိန် တိုးဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ပေါင်၊ နှစ်ပေါင် ကျဖို့ အတွက်တော့ အချိန်ယူရပါမယ်။ စိတ်ရှည်ရပါမယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု တစ်မျိုးမျိုးကို ဇွဲရှိရှိနဲ့ အချိန်မှန် လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။ အစားအသောက် ကိုလည်း အချိန်နဲ့ စနစ်တကျစားပြီး အာဟာရဖြစ်ဖို့ ကိုလည်း ဝဝလင်လင် စားပေးရပါမယ်။ အဆီတိုးမှာစိုးလို့ ဆိုပြီးတော့ အသားမစားဘဲ ငါးအမျိုးမျိုးကို စားကောင်းအောင် ချက်ပြုတ် စားသောက်တာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက် တစ်ခုခု မစားခင် ရေနည်းနည်း သောက်တာ၊ စားသောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း ရေနည်းနည်း ထပ်ပြီး သောက်ပေးတာက အစားအသောက်ကို အလွန်အကျွံ မစားသောက် မိအောင် ထိန်းပေးထားသလို ဖြစ်ပါတယ်။ အစာချေဖျက်ဖို့ အတွက်လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေ ပါတယ်။
အမှန်တော့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစားအသောက်ကို စားသုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပျော်ရွှင်နေဖို့ တော့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ဖို့ အတွက် အားကစား တစ်ခုခုကို ဇွဲရှိရှိနဲ့ ရေရှည် အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားကစားမယ် ဆိုရင် သင့်တင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကို ထိန်းထားပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အပြင် ကြံ့ခိုင်တဲ့ ပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတိုင်း လှပနိုင်ပါစေ၊ လှပသူတိုင်းလည်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Google account အသုံးပြုပြီး 1 GB ပေးထားတဲ့ Free Hosting လေးတစ်ခုပါ။ Word Document, Speed sheet, PPT Presentation, Note တွေနဲ့ ပုံတွေကို သိုမှီးထားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုနိုင်သလို အများသုံး Share လုပ်ခွင့်လည်း ပေးထားပါတယ်။ Office သုံးသူများ နှစ်သက်မှာပါ။ ဒီကနေ Click လုပ်ပြီး Sign-in လုပ်ယုံပါပဲ။
Posted by Welcome at 2:00 PM
နှင်းတောထဲမှာ ငါကျေနပ်စွာနဲ့ နစ်နေပါရစေ
ကြွေရက်မစောသေး သရွေ့ပေါ့ ကောင်မလေးရယ် .. ..
Labels: ကဗျာ, ချစ်သူကိုပန်းပေးမယ်
Internet ပေါ်အလည်လွန် ရင်းနဲ့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်လေးတွေကို မျှဝေပေး ချင်ပါတယ်။ မရောက်ဖူး သေးသူများအတွက်တော့ အသစ်ပေါ့ဗျာ။ ရောက်ဖူးပြီး သူများ အတွက်တော့ နားလည်ပေး စေချင်ပါတယ် .. .. ပုံတွေကို Click လုပ်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ် ..
ဗိသုကာ လက်ရာမြောက် အိမ်ပုံစံပေါင်း ၂၉၀၀၀ ကျော်ကို ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက် လေးကို မျှဝေပေးချင် ပါတယ်။ ဗိသုကာလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နေသူများအတွက် လက်တွေ့ အသုံးတည့်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိမှာရှိတဲ့ မြေဧရိယာ အပေါ်မှာ မိမိ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင် တည်ဆောက် ယူနိုင်တဲ့ Quick Search လည်းပါဝင် ပါတယ်။ ဗိသုကာများ သာမက ကိုယ်ပိုင် အိမ်တစ်အိမ် ဆောက်ဖို့ စိတ်ကူးနေသူတွေ အတွက်လည်း စိတ်ကူးယဉ်လို့ ကောင်းမယ့် အိမ်ပုံစံတွေကို မြင်တွေ့ရမှာမို့ ပေးထားတဲ့ ကွက်လပ်ထဲမှာ လိုချင်တဲ့ ကိန်းဂဏန်း ဖြည့်သွင်းလိုက်ယုံပါပဲ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်လေး ဆီကို ဒီမှာ Click လုပ်ပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။
သိပ်ချစ်တယ် ကောင်မလေးရယ် လို့
အော် မှတ်မှတ်ရရ ဆိုတာ
ဘာမှ မရှိတဲ့ ငါ့လိုကောင်မှာ
နောက်ဆုံးလေပဲလား . . . . .. ။
Labels: ကဗျာ, အချစ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုကို စိတ်ဝင်စားသူ တွေအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်လေး မျှဝေ ချင်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ အကြောင်းအရာ တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဒီဆိုက်လေးမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သစ်တောကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ သားရိုင်း တိရိစ္ဆာန်၊ သဘာဝသယံဇာတ၊ ဂေဟစနစ်၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ၊ ရေအရင်းအမြစ်၊ ရာသီဥတု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ၊ ပညာရေး စတာတွေကို ခေါင်းစဉ်ခွဲပေါင်း ၃၀ ကျော်နဲ့ နှစ်သက်သလို ရှာဖွေ လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်အောင် စုဖွဲ့ထားပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဒီကနေ Click လုပ်ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 4:09 PM
အမှန်တရားကို မသိနိုင် မမြင်နိုင်သူဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူဟာ စကားကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် ပြောတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးကို ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိဘူးလို့ ခေါ်တယ်။
ဒီလိုလူမျိုးကို အသိဥာဏ်ပညာ ကင်းမဲ့တယ်လို့လည်း ခေါ်တယ်။
ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးဟာ လူနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ အားကိုးရာလို့ ပြောဆိုနေကြပေမယ့် လူဆိုတာ တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း၊ တစ်ကိုယ်တည်း မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အားကိုး အားထားရာ ဖြစ်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ မေ့လျော့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရာမှာ ကိုယ်ပေါင်းတဲ့သူဟာ ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ထားမှန်ကန်ပါမှ အဆင်ပြေပြေ ဆက်ဆံနိုင်မှာပါ။ လိမ်လည်လှည့်ဖြား ခံရရင် ခင်မင်မှုတွေဟာ သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်သွားမှာပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ခင်မင်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်အတွင်းရေးကို ပြောပြမိတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ကို သစ္စာမရှိ ကျောခိုင်းသွားရင် ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ အမွှမ်းခံရသလို ခံစားရပါမယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ရည် ဘယ်လောက်ပဲ လှနေပါစေ၊ အတတ်ပညာတွေ ခေါင်မိုးထိအောင် တတ်နေပါစေ စိတ်ထားမမှန်ရင် စိတ်ထားမရိုးဖြောင့်ရင် သူ့ကို ပေါင်းသင်းတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဖယ်ကြဉ်ခြင်းကို ခံရမှာ မလွဲမသွေပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ကိုယ်တည်း အဖော်မဲ့ပြီး စိတ္တဇသမား တစ်ယောက်လို ယောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေမှာပါ။ စကားပြောဖော် မဲ့သွားတာမို့ ဆွံ့အ နားမကြားတဲ့ ရောဂါသည်လို လွင်လွင်လေးနဲ့ ရူးနေမှာ အသေအချာပါပဲ။
လူ့လောကကြီးမှာ လူတွေဟာ အမှီရှိမှ တိုးတက်ပါမယ်။ ကိုယ်အမှီသဟဲ ပြုတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ကလည်း ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းပါမှ အရာရာ တိုးတက်အဆင်ပြေ ပါမယ်။ ကိုယ်နဲ့ ရေရှည် လက်တွဲမယ့် လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ထားမှန်ကန်ဖို့၊ စိတ်လှသူ ဖြစ်ဖို့ အထူးလိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား ချင်ပါတယ်။ စိတ်နှလုံး နူးညံ့ သိမ်မွေ့သူတွေနဲ့ ကြုံဆုံ နိုင်ပါစေ၊ စိတ်သဘောထားကြီး မြတ်သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 10:51 AM
မိမိရဲ့ဘဝကို သူတစ်ပါးက လေ့လာသင်ယူသလို သူတစ်ပါးရဲ့ ဘဝကိုလည်း မိမိက အမြဲ လေ့လာ သင်ယူနေရ ပါတယ်။ ဒီလို အစဉ်အမြဲ လူတိုင်း လူတိုင်းကို လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုရင် အချိန်တိုင်းအဖို့ အဖိုးတန်တဲ့ အတွေးသစ်တွေ၊ အမြင်သစ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရရှိနိုင်မှာ မလွဲပါဘူး။ ဒါဆိုရင် လူ့ဘဝကြီးဟာ ငြီးငွေ့ဖို့ အချိန်ဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ မိမိရဲ့ဘဝ အောင်မြင် တိုးတက်ဖို့အတွက် အမြဲကြံစည် တွေးဆ အားထုတ် နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာ သုံးသပ်လို့ရတဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ တွေနဲ့ မိမိဘဝကို မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ ပြုစုပျိုးထောင် အရောင်တင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါမယ်။
လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘဝခရီးမှာ အခက်အခဲတွေ၊ အကြပ်အတည်းတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ မပြည့်စုံမှုတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ဒုက္ခဗျာပါဒ တွေနဲ့ မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမှာကို ကြောက်ရွံ့နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအခက်အခဲ တွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခက်အခဲ အတက်အကျ အနိုင်အရှုံးတွေဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ အရည်အချင်းကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးတဲ့ မှတ်ကျောက် တစ်ခုပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာ ကြီးလေ အရည်အချင်း လိုအပ်လေ၊ အရည်အချင်း ပိုပြည့်ဝလာလေ ဂုဏ်တက်လေပဲ ဖြစ်ပါမယ်။ အခက်အခဲတွေ့တိုင်း ကျောခိုင်းရှောင်ပုန်း အရှုံးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှု ဆိုတဲ့ အသီးအပွင့်ကို ဆွတ်ခူး ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစား ရုန်းကန်မှသာ မိမိရည်မှန်းချက် အမှန်ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတတ်ပညာ ပြည့်ဝခြင်းသည် ဦးနှောက်ကောင်းတဲ့ လူတော်လူချွန် အဖြစ်ကို ရရှိစေပါတယ်။ နှလုံးလှခြင်းသည် ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံတတ်ခြင်း စတဲ့ အရည်အသွေးများကို ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။ ပညာတတ် လူတော် ဖြစ်ရုံနဲ့ မပြည့်စုံပါဘူး။ ပညာတတ်ပြီး စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း ရှိဖို့လည်း လိုအပ်လှပါတယ်။
ရွှေငွေ စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရင် ပြန်ရှာလို့ ရနိုင်တာမို့ မဆုံးဘူးပဲ သဘောထား နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်ရင်လည်း ခဏတာမို့ ပြန်လည်ကုစား နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီး ယိုယွင်းခဲ့မယ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရား တွေအဖတ်ဆယ် မရခဲ့ရင်တော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း ထဲကို ပြန်ဝင်ဆန့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး အရိပ်မည်းအောက်မှာ သိမ်သိမ်ငယ်ငယ်နဲ့ နေသွားရတော့ မှာပါ။ လူ့မူ အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ၀ိုင်းပယ်ခြင်းကို ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အရည်အသွေး တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လူတော်လူကောင်းများ၊ ခေတ်ပညာတတ်များ အနေနဲ့ မိမိဘဝကို မိမိ အစဉ်ပြုစု ပျိုးထောင် ဖြည့်ဆည်းနေရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ငှက်တွေဟာ ပျံရင်းနဲ့ သေရသလို၊ လူတွေမှာလည်း ကြံရင်းနဲ့ သေကြရတာပါ။ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ဘဝတန်ဖိုး အလှတိုးနိုင်ကြပါစေ .. ..။
Posted by Welcome at 11:25 PM
စာလာဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သက်တောင့် သက်သာနဲ့ ဖတ်နိုင်အောင်လို့ ဘလောဂ့် တင်းပလိပ်ကို ပြင်မိပါတယ်။ တင်းပလိပ် အဟောင်းကလည်း ကြာပြီဆိုတော့ ငြီးငွေ့ လောက်ရောပေါ့ ဆိုပြီး စေတနာနဲ့ပါ။ ပထမပြင်တဲ့ တင်းပလိပ်လေးကို နှစ်သက်ပေမယ့် စာဖတ်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ထပ် တင်းပလိပ် ထပ်ရှာပါတယ်။ တစ်ခုပြီး တစ်ခုပေါ့။ စိတ်ကြိုက် တင်းပလိပ် မရခင်မှာ Save Template ကို မှားယွင်း နှိပ်မိရာက နေ အမှားကြီးမှားသွားမှန်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားပါပြီ။ ခုတော့ မချစ်ပေမယ့် အောင့်ကာနမ်း ရတော့မယ့် ပုံပါပဲ။ ကလေးကလား ဆန်တာကို သိနေပေမယ့် နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်ပါစေဗျာ။ လောလောဆယ် ဒီတင်းပလိပ်နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားတော့မယ်။ စိတ်ပင်ပန်း သွားလို့ပါ။
ယူကြုံးမရ ဖြစ်မိတာက ကျွန်တော် တန်ဖိုးထားတဲ့ Link List က သူငယ်ချင်း (၃၀၀) ကျော်နဲ့ Post List က (၁၆၀)ခု တို့အတွက် ပြန်မရ နိုင်တော့ပါဘူး။ အချိန်ယူပြီး ပြန်လည် ဖန်တီးရမှာမို့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အားလုံးကို တောင်းပန်တယ်။ တမင် ဖျက်လိုက်တာ မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်။
Posted by Welcome at 7:53 PM
မနာလို ၀န်တိုစိတ်ကို ဘယ်အရာက ကုစားနိုင်ပါသလဲ ?
မနာလို ၀န်တိုဖြစ်မှုကို ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခုထဲကသာလျှင် ကုစားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မနာလို ၀န်တို ဖြစ်မှုသည် ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ကြီးမားသော အဟန့်အတား ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
လူသားတိုင်းပါပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ နေထိုင်လိုကြတာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ သူတွေကလည်း အများအပြားပါ။ မပျော်မရွှင် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေကလည်း ဖော်မပြနိုင်အောင်ပါပဲ။ အဓိကကျ တာကတော့ မနာလိုမှု ၀န်တိုမှု ဖြစ်နေတာက မပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မနာလို ဖြစ်ခြင်းဟာ ထိုသူရဲ့ ပြင်းပြသော လိုအင်ဆန္ဒအတွက် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေတာ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မနာလို ၀န်တိုစိတ်ဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လည်း တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဆက်စပ်နေတာပါ။ မိမိ မရနိုင်တဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာကို အားမကျသင့်ပါဘူး။ မိမိမရနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုး ကိုလည်း စိတ်ကူး မယဉ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလို အားကျမိမယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်မိမယ် ဆိုရင် မနာလိုစိတ်၊ ၀န်တိုစိတ်ကို နိုးဆွ ပေးလိုက်သလို ဖြစ်စေ ပါတယ်။
မနာလိုဖြစ်မှု ၀န်တိုမှုကို မကောင်းမှုတစ်ရပ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ မကောင်းမှုကို ခွင့်လွှတ် သည်းခံရပါမယ်။ ဒါမှ တရားမျှတတဲ့ လူ့ဘောင် ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မနာလို ၀န်တိုမှုဟာ လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အတွက် တွန်းအားတစ်ရပ် ဖြစ်နေလို့ပါ။ မနာလို ၀န်တိုမှုကြောင့်ပဲ တရားမျှတရေးနဲ့ ညီမျှရေး ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
မနာလို ၀န်တိုမှုဟာ တစ်ကိုယ်ထဲ အမှောင်လမ်းမှာ စမ်းတ၀ါးဝါး လမ်းလျှောက်နေတာနဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နားခိုရာဆီ ရောက်ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့။ မနာလို ၀န်တိုစိတ်ကြီးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံ ခဲ့ရင်တော့ တစ်သက်လုံး ပြင်မရတဲ့ အမှားတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်သလို ဖြစ်နေပါမယ်။
မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့တဲ့ အနေအထားကနေ လမ်းမှန်တဲ့ ယဉ်ကျေးသော လူ့ဘောင်သည် ထိုသူရဲ့ စိတ်ကိုပိုမို အသိတရား ရစေနိုင်သလို သူရဲ့ အသည်းနှလုံးကိုလည်း ကျယ်ပြန့်စေဖို့ အားထုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီ အတ္တစိတ်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက်လည်း သူကိုယ်တိုင်လေ့လာ သင်ယူရပါမယ်။ ဒါမှသာ ပျော်ရွှင်တဲ့ ချမ်းသာသုခကို ရရှိခံစား လာနိုင်မှာပါ။ ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
Posted by Welcome at 11:00 AM
N 85 Model Smartphone ( Nokia )
2 to5Megapixel ရုပ်ထွက် ကင်မရာနှင့် အလင်း နှစ်ဆအားကောင်းသော Fresh-gun ပါဝင်တယ်။ အရောင်ကလေးတွေ လှတယ်။ Display က ၂.၆ လက်မရှိတဲ့ Amoled ဖန်သားပြင်ဖြစ်တယ်။ ဓာတ်ပုံများ ကြည်လင် ပြတ်သားပြီး တစ်စက္ကန့်ကို အကွက် ၃၀ ထွက်ပေါ်စေမယ့် DVD Quality ဗီဒီယိုရိုက်ကူး နိုင်တယ်။ တစ်ခါ အားသွင်းထားရင် ၂၈ နာရီ အထိ MP3သီချင်းတွေကို ဖွင့်နိုင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် smartphone ဖြစ်တယ်။
N 79 Model Smartphone ( Nokia )
3.2 Megapixel ကနေ5Megapixel အထိ ရုပ်ထွက်ကင်မရာ ပါရှိတယ်။ အလင်း နှစ်ဆအားကောင်းသော Fresh-gun ပါဝင်တယ်။ 3G, GPS နဲ့ ၂၄ နာရီ MP3နားဆင်နိုင်တယ်။ ချောကလက်ရောင် ပုံစံလေးကြောင့် စွဲမက်စရာဖြစ်တယ်။
ကိုယ်က ၀ယ်သုံးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသစ်အဆန်းပေါ်ရင် အရင်ဆုံးကလိ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Nokia ဖုန်းတွေ epl ဘောလုံးပွဲကို တိုက်ရိုက် လောင်းလို့ရတယ်။ ( ၀ါသနာပါရင် ပြောပါတယ် ) ဂိမ်းပါတဲ့ ဖုန်းတွေ အပျက်များတယ်၊ ခေါက်ဖုန်းတွေ အပျက်များတယ်။ စတိုင်လ် ထုတ်တာ များသွားလို့လား မသိ။ ဖုန်းပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အကြမ်းပတမ်း ခံပါတယ် ပြောပြော ခလုပ်ကျွံတာတွေ၊ တက်ထိုင်မိလို့ အံလွဲသွားတာတွေ အမြဲ တွေ့ရတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ မော်ဒယ်နိမ့်တာ ကိုင်ထားပြီး သူများနည်းတူ software ထည့်ချင်တယ်၊ game ထည့်ချင်တယ်။ လုပ်မဖြစ်တော့ ဗျစ်တောက် ဗျစ်တောက် ဖြစ်သွားတယ်။
Posted by Welcome at 8:46 AM
Labels: မျှဝေခြင်း, အထွေထွေ
အနောက်ဖက်မှာ Spring လို့ခေါ်တဲ့ မိုးရာသီ၊ Summer လို့ ခေါ်တဲ့ နွေရာသီ၊ Autumn လို့ခေါ်တဲ့ ဆောင်းဦးဝင်ရာသီနဲ့ Winter လို့ခေါ်တဲ့ ဆောင်းနှောင်းရာသီ ဆိုပြီး ဥတု(၄)လီ ရှိပါတယ်။ ဆောင်းဦး ရာသီဟာ သူတို့ဆီမှာ သိပ်ပြီး အအေးဓာတ် မခံရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ချွေးမထွက် ရုံလောက်နဲ့ စိမ့်စိမ့်လေးအေးတဲ့ အနေတော် ရာသီဥတု မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းနှောင်းရာသီ ရောက်ပါမှ ဖြူဖွေးနေတဲ့ နှင်းတွေလည်းကျ၊ အအေးဓာတ် ကလည်း မခံမရပ်နိုင်အောင် ပြင်းထန်တဲ့အပြင် တစ်ခါတလေ နှင်းမုန်တိုင်းတောင် တိုက်ခတ်တဲ့ အထိ ဖြစ်တတ်တာကို နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ တွေ့ရတတ် ပါတယ်။
မိန်းကလေး တွေဟာ အလှအပကို နှစ်သက်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဒါကိုသိတဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းနာတွေကရာသီအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ အ၀တ်အထည်တွေကို တီထွင်ချုပ်လုပ်ကြ ပါတယ်။ ကိုယ်တီထွင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို ပဲရစ် နဲ့ မီလန်လို မြို့ကြီးတွေမှာ ငွေကြေးအကုန် အကျခံပြီး တင်ဆက်ပြသ တာတွေကို mrtv-4 ရဲ့ဖက်ရှင်လိုင်း ကနေ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြည့်ဖြစ်တဲ့၊ တွေ့နေကျ ဖက်ရှင်လိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေး တတ်နိုင်သူများကို ရည်စူးပြီး တီထွင်ချုပ်လုပ် သလို ဆင်းရဲသူများ အတွက်လည်း ဖက်ရှင်တွေ တီထွင်ပြီး ပေါ၊ ချောင်၊ ကောင်း ရောင်းချပေးပါတယ်။ ချမ်းသာသူတွေဟာ ရာသီတစ်ခုအတွက် ၃ စုံ၊ ၄ စုံ လောက်သာဝယ်ပြီး ရာသီကုန်တာနဲ့ မ၀တ်ကြတော့ဘဲ စွန့်ပစ်လိုက်ပြီး နောက်နှစ်ရာသီ အတွက် ထပ်ဝယ်၊ နောက်တစ်ခါ ထပ်စွန့်ပစ် ဆိုတဲ့ ပုံစံပါ။ အဲဒီ ဓလေ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေဟာ မရှိဆင်းရဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေက မတတ်နိုင်သူတွေဆီကို အကောင်း ပကတိအတိုင်း ရောက်သွားကြပါတယ်။
Missioni, Mac, Etro, Gucci ဖက်ရှင် ကုမ္ပဏီကြီး တွေက ဆောင်းဦးရာသီ အတွက် တီထွင်ထားတဲ့ အ၀တ်အစား တွေကို model တွေနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ၀တ်ဆင်စေပြီး ရှိုးပြခဲ့တာတွေပါ။ ဆောင်းတွင်းဆိုပြီး နွေးရင်ပြီးရော၊ ပုံမကျ ပန်းမကျ ၀တ်ထားတဲ့ ထူထူထဲထဲ ၀တ်စုံတွေကို ၀တ်မယ့်အစား မိန်းကလေးတွေကို ရာသီမရွေး လှပစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ တီထွင်သူ Designer များရဲ့ စေတနာကို နားလည်ပေးကြပါ။
Posted by Welcome at 4:20 PM
" သင့်ကို ကျွန်ုပ်လေးစားပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုလည်း သင်လေးစား သင့်ပါသည် " ဆိုတဲ့ စကားလေး အတိုင်း သူတစ်ဦးကို လေးစားစွာ ပြောဆို ဆက်ဆံလိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်း လေးစားရာရောက်ပြီး ထိုသူကလည်း ကိုယ့်ကို လေးစားလာပါမယ်။ လေးစားမှု ထားရမယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေကိုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သူ့ကိုမဆို လူတိုင်း လူတိုင်းကို ဆိုလိုချင်ပါတယ်။ မြန်မာမှုမှာ " ကြီးသူကို ရိုသေ၊ ရွယ်သူကို လေးစား၊ ငယ်သူကို သနား" ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပါတယ်။ မိမိထက် အသက်အရွယ် ကြီးသူကို ရိုသေသမှုနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဟာ လေးစားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တူ ရွယ်တူ အချင်းချင်း လေးလေးစားစား ပြောဆိုတတ်ခြင်း ဟာလည်း လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိထက် အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ ညီငယ် ညီမငယ် တွေကို အသက်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ၊ ရာထူးဂုဏ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်စေ၊ မေတ္တာတရား ရှေ့ထားပြီး ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အပြန်အလှန် လေးစားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားချင်ပါတယ်။
ရဟန်းနဲ့ ဒကာ၊ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဆရာနဲ့ တပည့်။ နောက် ညီအစ်ကို မောင်နှမချင်း၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ချင်း၊ ဇနီးမောင်နှံချင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးလေးစားစား ပြောဆို ဆက်ဆံခြင်းသည် သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးဖော်ဆောင် နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးသည်၊ ရွယ်တူ၊ ငယ်မူ မဆို ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစနဲ့ ကိုယ်ပိုင် သိက္ခာကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ အပ်နှင်းမထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဂုဏ်ဒြပ်တွေလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ လေးလေးစားစား ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံခြင်းသည် ကောင်းခြင်း မင်္ဂလာတစ်ပါးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားသမှု ပြောဆိုခြင်းဟာ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖြစ်စေသလို မိမိတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်ဓာတ်မြင့်မားမှုရဲ့ ပြယုဂ်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသားအချင်းချင်း လေးလေးစားစား ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်း သမီး Lady and Gentle man များ ဖြစ်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Posted by Welcome at 6:10 PM
Labels: ကဗျာ, ဆုတောင်း, အချစ်
ကျွန်တော်က သူ့ကို အလေးထား တယ်
သူက ကျွန်တော့်ကို ရှင်နော်ရှင် တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့ကို အမှတ်ရ တယ်
သူက ကျွန်တော့်ကို လူပိုကြီး တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့ကို ချစ်လို့စတယ်
သူက ကျွန်တော့်ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့ကို အမြဲချော့တယ်
သူက ကျွန်တော့်ကို လာမရစ်နဲ့ တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့ပို့စ်မှာ အမြဲကွန်မင့်ရေးတယ်
သူက ကျွန်တော့်ပို့စ်ကို ဖတ်တောင်မဖတ်ဘူး တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့အတွက် ကဗျာတွေရေးတယ်
သူက ကျွန်တော့်ကို စောင်းမြောင်းရေးမနေနဲ့ တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့အိမ်ကို ၂၄ နာရီရောက်တယ်
သူက ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ၃ စက္ကန့်ကြာတယ် တဲ့
ကျွန်တော်က သူ့အိမ်တံခါးကို အမြဲခေါက်တယ်
သူက ကျွန်တော့်အိမ်က ရုရှားမှာလား တဲ့ .. .. ။
အမှတ်တရ ပဋိပက္ခများ (တစ်) ကိုဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ် ။
(ဒီမနက် ကွန်နက်ရှင်းမကောင်းတာမို့ ကလိရင်းကနေ ဒီကဗျာပို့စ်လေး ပျောက်သွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကွန်မင့် (၁၆)ခု တော့ ပြန်မရနိုင်ခဲ့တာမို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကွန်မင့်တွေ ပြန်မရတော့တာမို့ ဘလောဂ့်ကို ပိတ်ဖို့ ၉၅% သေချာနေပါပြီ အဟင့် အဟင့် (အရှက်မဲ့တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ငိုပြရအုန်းမယ် ဘလောဂ့်မှာ လူစည်အောင်၊ လူများများလာအောင် ဒီတစ်နည်းပဲ ရှိတယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ ))
Posted by Welcome at 10:18 AM